यसरी सक्रिय बनाउनुस् आफ्नो सेक्स लाईफ ! कुन उमेर के गर्ने ? – Rastriyapatrika
यसरी सक्रिय बनाउनुस् आफ्नो सेक्स लाईफ ! कुन उमेर के गर्ने ?
सक्रिय यौनजीवन (एक्टिभ सेक्स लाइफ) स्वस्थ वैवाहिक जीवनको पहिलो शर्त हो । यसैले आफ्नो सम्बन्ध बलियो बनाउन उमेरको हरेक समयमा आफ्नो यौनजीवन (सेक्स लाइफ) लाई रिचार्ज गर्दै रहनुपर्छ ।
व्यक्तिको उमेरसँगै भौतिक आवश्यकताका साथ शारीरिक सम्बन्धको पनि जरुरत बढ्दछ र विभिन्न कारणले यो आफैं बदलिन्छ । उमेरसँगै यौनजीवनको ग्राफ बढ्छ । अतःसबै उमेरमा सेक्सलाइफलाई सक्रिय बनाइ राख्ने विभिन्न तरिका बुझ्न जरुरी छ ।
उमेर २० वर्ष
हेल्दी सेक्सलाइफको दृष्टिले २० देखि ३० वर्षको उमेर सेक्सका लागि उत्तम हुन्छ । यस उमेरमा सेक्स हर्मोन्सको विकास धेरै हुन्छ । सेक्स चाहना पनि छिट्टै जागृत हुन्छ । यो बेला पुरुष पार्टनरलाई मात्र नभई स्त्री पार्टनरलाई पनि सेक्सको उत्तिकै जरुरत पर्छ ।
यो उमेरमा के हुन्छ ?
यस उमेरमा आफ्नो सेक्स चाहना तृप्त गर्न अधिकांश जोडी पोर्नोग्राफीको सहारा लिन्छन् । केही जोडी पोर्नोग्राफीबाट प्रभावित भएर आफ्नो पार्टनरसँग पनि त्यस्तै सेक्सको अपेक्षा राख्छन् । तर यो पूरा नहुँदा उनीहरुबीच मनमुटावको स्थिति पैदा हुन्छ । यस उमेरमा दुवै पार्टनर एक अर्कालाई सन्तुष्ट कसरी पार्ने ? जस्ता प्रश्न मनमा खेलाएर चिन्तित पनि रहन्छन् । यसले उनीहरुको यौन क्षमतामा नकारात्मक असर पर्नसक्छ ।
पोर्नोग्राफीको चक्करमा भ्रमित भएर पार्टनरसँग उल्टासिधा प्रयोग गर्न नखोज्ने ।
तनावमुक्त सेक्सको आनन्द लिन कन्ट्रासेप्शनको प्रयोग गर्ने ।
पार्टनरलाई भावनात्मक रुपमा खुशी राख्ने । यसले यौनक्रिया अझ बढी आनन्ददायक हुन्छ ।
उमेर ३० वर्ष
यो उमेर सेक्सका लागि धेरै राम्रो समय हो । ३० वर्षको उमेर सम्म पुगिसक्दा सेक्स लाइफ पहिले भन्दा निकै धेरै सक्रिय हुन्छ । जोडीहरु एक अर्काको शारीरिक इच्छालाई बुझ्न लाग्छन् । महिलाको सेक्स प्रति हिचक पनि कम हुन्छ । यसले उनी पनि सेक्समा सक्रिय भूमिका निभाउन लाग्छिन् ।
यो उमेरमा पुरुष करियर बनाउने र पैसा कमाउने चक्करमा धेरै ब्यस्त रहन्छन् र सेक्स लाइफलाई नजरअन्दाज गर्दछन् । महिला पनि पूर्ण रुपमा घर परिवार एवं बच्चालाई सम्भाल्नमा जुटिरहन्छिन् । यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारीको बोझले उनीहरुको कामेच्छा कम हुनसक्छ ।
आपसी सम्वाद बनाइराख्ने । वैवाहिक सम्बन्ध बलियो बनाउन यो धेरै जरुरी हुन्छ ।
वीकेएन्ड (साप्ताहिक) मा घुम्न जाने । रोमान्टिक सिनेमा हेर्ने ।
यदि रातमा थकानका कारण सेक्सको इच्छा नभएमा बिहानीपख सेक्सको आनन्द लिने ।
एक अर्कासँग मजा लिने कुनै पनि मौका नगुमाउने ।
उमेर ४० वर्ष
यस उमेरमा पुग्दा पुग्दै जोडीको सेक्स इच्छामा परिवर्तन आउँछ । यो समय उनीहरुको कामेच्छामा गिरावट आउँछ भन्ने नभई पति पत्नी दुवै भावनात्मक र शारीरिक अवस्थामा धेरै परिपक्क हुन्छन् । यो उमेरको महत्वपूर्ण कुरा भनेको एक अर्कालाई सन्तुष्ट पार्न पार्टनरलाई धेरै टेन्सन हुँदैन ।
यो उमेरमा धेरै जोडीहरु आफ्नो शरीर र फिटनेसमा ध्यान दिँदैनन् । यो उमेर सम्म पुग्दा धेरै जोडीहरु डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जस्ता रोगको चपेटामा पर्दछन् जसले उनीहरुको सेक्स लाइफ प्रभावित हुन्छ ।
फोरप्लेको समय बढाउने वा नयाँ तरिकाले फोरप्लेको शुरुवात् गर्ने ।
सेक्स लाइफलाई रोमान्टीक बनाउन अलग अलग पोजिशन ट्राइ गर्ने ।
शारीरिक रुपले फिट रहने कोशिस गर्ने । शरीरको सेप बिग्रन नदिने ।
आफ्नो डे«सिंग सेन्समा ध्यान दिने । पार्टनरलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्ने कुनै मौका नगुमाउने ।
चिया, कफी, सिगरेट, ड्रिग्स आदिबाट टाढा रहने । यी चिजले रोगलाई आमन्त्रित गर्दछन् ।
उमेर ५० वर्ष
५० वर्षकोको उमेर सम्म पुग्दा महिलामा मेनोपाँज (महिनावारी सुक्ने समस्या) आउँछ । यसले शरीरमा एस्ट्रोजन हर्मोनको मात्रा कम हुन्छ । महिलाको योनीमा चिल्लोपना र सेन्सेशन कम हुन्छ र कामेच्छामा कमी आउँछ ।
उमेरको यस समयमा महिलाहरु सेक्समा दिलचस्पी देखाउन पनि लाज महसुश गर्न लाग्दछन् । पहिला जस्तो ऊर्जा वा उत्सुकता नहुने कारण उनीहरु सेक्स गर्न हिचकिचाउँछन । यो उमेरमा पुरुषलाई पनि इरेक्शन सम्बन्धी समस्या हुनलाग्छ ।
यस उमेरमा सेक्सलाइफलाई जिवन्त बनाइराख्न जीवनसाथीलाई आजपनि उसलाई तपाईं उत्तिकै माया गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनसक्नुपर्छ ।
पुराना दिन खासगरी अन्तरंग समयको याद गर्ने र पार्टनरलाई पनि त्यस समयको याद दिलाउने ।
पार्टनरको साथ धेरै भन्दा धेरै समय बिताउने ।
सबै उमेरमा सेक्सको मजा लिन निम्न कुरामा ध्यान राख्ने
अत्यधिक औषधि खानबाट बच्ने । पेन किलर वा तनाव हटाउने औषधिले यौन जीवनलाई प्रभावित पार्छ ।
उमेर बढ्नाले सेक्स लाइफ खत्तम हुन्छ भन्ने नसोच्ने ।
घर परिवार एवं बच्चाको साथसाथै जीवनसाथीको शारीरिक एवं मानसिक जरुरतको पनि कदर गर्ने ।
मेनोपाँजलाई सेक्सको अन्त नसम्झने । यसलाई नयाँ शुरुवात् सम्झेर अघि बढ्ने ।
उमेरको हर समयमा आफूलाई फिट राख्ने कोशिस गर्ने । अब उमेर गयो भन्ने नसोच्ने ।
तपाइको उमेर जति धेरै भए पनि सँधै पार्टनरको साथ एउटै कोठामा सुत्ने ।